Shiinaha warshad wax lagu duubay oo duuban oo duuban | Shallow Yong
Marka lagu daro taxanaha mitirka, saa'idka duubista duuban ayaa sidoo kale leh taxane Ingiriis ah. Xeerarka iyo cabirrada taxanaha mitirku waxay waafaqayaan heerarka ISO, taxanaha Ingiriiskuna waxay la jaan qaadayaan heerarka AFBMA.
Saa'idka rullaluistemadka duuban leeyihiin qaabab kala duwan, sida isku xigta hal, isku xigta double iyo afar isku xigta biraha rullaluistemadka duub. Si looga hortago isbadal baabi'inta u dhexeeya rullaluistemadka iyo wadiiqada ee ay sababaan xoog aan firfircooneyn marka dhalista ay ku socoto xawaare sare, dhalista waa inay qaadaan culeys gaar ah.
Qaadista duubista duuban ayaa ku habboon qaadista culeyska radial, culeyska foorarsiga aan toosneyn iyo isku darka shucaaca iyo xajmiga. Awoodda xaddiga xamuulka ee xargaha duubista waxay kuxirantahay xagasha xiriirka, contact, taas oo ah, xagasha giraanta banaanka tartanka. Weynaanta xagasha xiriirka α, ayaa sii weynaanaya awoodda culeyska foorari.
Isku xigta Single dhalista rullaluistemadka
Qaadista noocan ahi waxay xaddidi kartaa baroosinka foorarsiga ee wiishka ama qolofka hal jiho oo waxay u qaadan kartaa culeyska foosha ee hal jiho. Marka la eego ficilka xamuulka shucaaca, waxaa la soo saari doonaa xoog ka kooban axial, kaas oo ay tahay inuu isu dheellitiro. Sidaa darteed, labada taakulo ee wiishka, labada waji waa in loo adeegsadaa qaab-ka-waji ama qaab-gadaal-gadaal.
Isku xigxiga Double dhalista duubista
Giraanta dibedda (ama giraanta gudaha) waa dhan. Wajiyada dhammaadka yar ee labada siddo ee gudaha (ama siddooyinka dibedda ah) waa isku mid, oo dhexda ayaa ku jira kabax. Fasaxa waxaa lagu hagaajiyaa dhumucda giraanta spacer. Qaadista noocan ahi waxay qaadi kartaa culeyska shucaaca iyo culeyska foorari ee laba-geesoodka ah isla waqtigaas. Waxay xadidi kartaa barakicinta foosha labada dhinac ee sita ama qolofka ku dhex jira xadka kala-bixinta nadiifinta.
Afar saf oo duub ah oo duuban
Waxqabadka noocan oo kale ah sita asal ahaan waa isku mid sida in of isku xigta dhalista rullaluistemadka isku xigta double, laakiin waxay qaadi karaan load ka badan radial ka badan dhalista rullaluistemadka duub isku xigta double, laakiin xawaaraha xadka uu ka hooseeyo. Waxaa badanaa loo isticmaalaa mashiinada culus sida wax lagu shiido.
Fossa waxay leedahay meerisyo badan oo duuban oo duuban, oo ay ku jiraan walxaha kala bixi kara, taas oo sahlaysa in wax laga beddelo dalabka.
Noocan dhalmada waxaa si weyn loogu isticmaalaa:
Xarumaha loogu talagalay gawaarida fudud, warshadaha iyo beeraha
Gudbinta (gudbinta iyo kala duwanaanta)
Qalab mashiinka mashiinka
Hore: Dhalista Roller goobeed
Xiga: QYBZ Deep Groove Ball Sita I